တရုတ်ဆေးပညာ၏ငါး Shen ၏ဖော်ပြချက်
ဘာသာတရား & ဝိညာဉ်ရေး အခြေခံမူ & အလေ့အကျင့်
အဆိုပါငါး Shen ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငါး yin ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို-စနစ်များ (နှလုံး, ကျောက်ကပ်, သရက်ရွက်, အသည်းနှင့်အဆုတ်) ၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါငါး-Shen စနစ်၏မူလအစဟာအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Shangqing နွယ် Taoist အလေ့အကျင့်၏။ ဤအဝိညာဉျ၏အသီးအသီးတစ် yin ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်ဒြပ်စင်နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးဂြိုဟ်၏စွမ်းအင်နှင့်တစ်ဦးဦးတည်ချက်နှင့်အတူမသာဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ "နိုး" ဖို့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ Shen တစ်ဦးအတွက် "ဝိညာဉ်အတွက်တောင်းဆို" ကိုဆင်တူသည် shamanic ရိုးရာဓလေ့ ။
မှန်သောချိန်ခွင်၌, ဂြိုလ် '' ဆင်တူတဲ့အချက်မှာအလှအပနှင့်အတူတုန်ခါ "ဟုအဆိုပါ Spheres ပုံများ၏သဟဇာတ။ " အဆုံးစွန်သောငါတို့ neidan (များ၏အခြေအနေတွင်အတွင်းသောအခါငါး Shen, အတွင်းပိုင်းအဂ္ဂိရတ် ) အလေ့အကျင့်, အငါးခု Shen Tao က၏စုစည်းထားသောစိတ်မှပြန်လာသောနေကြတယ် ။
အဆိုပါငါး Shen သည့်စနစ်အတွင်းကျွန်တော်တစ်ဦးဝိညာဉျရေးရာအဆင့်ဆင့်နဲ့တူတစ်ခုခုတွေ့ပါ: - နှလုံး၏ဝိညာဉ် - Shen ဝန်ကြီးများနဲ့တူ - - ၎င်း၏အာဏာကိုရှုထောင့်နှင့်အတူဧကရာဇ်သည်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏ဝိညာဉ်အဖြစ်နေထိုင်။ ဤအအလယ်တန်းဝိညာဉ်များနှလုံးရဲ့ Shen ၏သစ်စာရှိသံတမန်များအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအကြားဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုပျော်ရွှင်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်မှုမျှမျှတတနဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် "ခန္ဓာကိုယ်ကနိုင်ငံရေး။ "
နှလုံးရဲ့ Shen နှင့်အတူသက်ဆိုင်တဲ့ element ကိုမီးဖြစ်၏။ ၎င်း၏ဦးတည်ချက်တောင်ဘက်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သည့်အဆိုပါဂြိုဟ်စွမ်းအင်အင်္ဂါဂြိုဟ်၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါငါး Shen ၏ဧကရာဇ်အဖြစ်, ငါတို့မျက်မှောက်မှတဆင့်စီးဆင်းစွမ်းအင်အတွက်ရိပ်မိနိုင်သည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ၏အလုံးစုံအရည်အသွေး, နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အသိအမြင်၏, တက်ကြွအရည်နှင့်အသိဉာဏ်ကြောင်း - Clear ကို, ဆင်းအရောင်, တုံ့ပြန်မှုမျက်စိကျန်းမာသန်စွမ်းသူ Shen များထဲမှအရိပ်အယောင်ဖြစ်ကြသည်။
Zhi: အကျောက်ကပ်ရဲ့ Will လုပ်ဆောင်ရန်
ကျောက်ကပ်စနစ်၏ Shen Zhi သို့မဟုတ်အလိုတော်ရှိ၏။ Zhi ၎င်းဒြပ်စင်ကိုရေနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ဦးတည်မြောက်စွမ်းအင်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်မာကျူရီသယ်ဆောင်နေပါတယ်။
Zhi သောအရာတို့ကိုပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တာဝန်ခံဝန်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအလေ့အကျင့်အတွက်အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ဇွဲပါဝင်သည်။ Taoism အဆိုအရပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလိုတော်၏အမြင့်ဆုံးသုံးစွဲမှု Tao ကအတူဆိုလိုသည်မှာသည် "ကောင်းကင်ဘုံ၏အလိုတော်" နဲ့ကိုယျ့ကိုယျကို align ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုမှပေါ်ပေါက်ဝိညာဉျတျော-ထုံမွှန်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို၏အရည်အသွေးရှိပြီး wuwei Non-ကုသိုလ်ကံနှင့်အလြောကျလိမ္မာသို့မဟုတ် "လက်ျာ" အရေးယူဆောင်ရွက်မှု: ။
အဆိုပါသရက်ရွက်စနစ်၏ဝိညာဉ်ရီ (သို့မဟုတ်ဉာဏ်) ဖြစ်ပါသည်။ ရီမြေကြီးတပြင်ဒြပ်စင်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်က၎င်း၏ဦးတည်ချက်စင်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီးယင်း၏ဂြိုဟ်စွမ်းအင် Saturn ဖြစ်ပါတယ်။ ရီပိုင်းခြားသိမြင်ကျင့်သုံးရနျကြှနျုပျတို့၏အယူအဆရေးရာစိတ်ကိုသုံးစွဲဖို့နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များဖွဲ့စည်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ပါဝင်သည်။ တစ်ဦး Over-စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ကြင်နာသို့မဟုတ် "pensiveness" ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသရက်ရွက်ကြောင့်: တစျခုခုကိုရီ discursiveness သို့မဟုတ်သတိလစ်ပြည်တွင်းရေးစကားများသောအဖြစ်ထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကျန်းကျန်းမာမာရီဝိညာဉျထုံမွှန်းထောက်လှမ်းရေးနှင့်နားလည်မှုအဖြစ်တငျပွ။
po: အဆုတ်၏ Corporate Soul
အဆိုပါဖိုးသို့မဟုတ် Corporation ဝိညာဉ်သည်အဆုတ်နဲ့ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်သေခြင်း၏အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒြပ်စင်နှင့်အတူပျော်ကြောင်းသတိ၏ရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖိုးသတ္တုဒြပ်စင်, ညှနျကွားခအနောက်ဘက်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဗီးနပ်စ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။
အဆိုပါဖိုးသာတစ်ခုတည်းတစ်သက်တာ၏ဆက်စပ်အတွင်းတည်ရှိကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသိပ်သည်းအလိုဆန္ဒများနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့လေ့ - ပိုပြီးတာဝေးပစ်ကတိကဝတ်ဖော်ပြသည့်ဟွန်, ဆန့်ကျင်သည်။
ဟွန်: အအသည်း၏အီ Soul
အဆိုပါ ဟွန်သို့မဟုတ်အီဝိညာဉျကို အသည်းစနစ်ဖြင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်တည်ရှိဆက်လက်ဝိညာဏ်၏ရှုထောင့်ဖြစ်ပါသည် - ပိုပြီးသိမ်မွေ့ဘုံထဲမှာ - တောင်မှခန္ဓာကိုယ်အသေခံပြီးနောက်။ အဆိုပါဟွန်ထင်းဒြပ်စင်နှင့်ဆက်စပ်သည်၎င်း၏ဦးတည်ချက်အရှေ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ဂြိုဟ်စွမ်းအင်ရှိသောဇုသ၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအလေ့အကျင့် ပို. ရငျ့အမျှ ပို. ပို. သည့်ဖိုးများ - သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ဝိညာဏ်၏ရှုထောင့် transmuted ဒါမှမဟုတ်ဟွန်အထောက်အပံ့အဖြစ်အသုံးပြုကြသည် - သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသိမ်မွေ့ - ရှုထောင့်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါကျနော်တို့တငျပွကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အလောင်းတွေအတွင်းဖြစ်ကြ၏ "ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကောင်းကင်။ "
အခုတော့တှေးတောဆငျခွထွက် Check - ဧလိရှဗက် Reninger နေဖြင့်တစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန် (သင့် Taoism လမ်းညွှန်) ။
ဤစာအုပ်ပိုပြီးယေဘုယျဘာဝနာညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူ (သကျသခေံသိစိတ်ကို & ဖယောင်းတိုင် / Flower-ကြည့် Visual Developing, တှေးတောဆငျခွ Walking ဥပမာကတော့အတွင်းပိုင်းအပြုံး) Taoist အတွင်းအဂ္ဂိရတ်အလေ့အကျင့်တစ်ခုအရေအတွက်ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်မှုပေးထားသည်။ ဒါဟာငါး Shen အာဟာရနှင့်တောက်ပနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းချိန်ခွင်လျှာထဲသို့လူ့ခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသောအလေ့အကျင့်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Taoist အလေ့အကျင့် & အစားအသောက်
တှေးတောဆငျခွ Walking အလေ့အကျင့်
2017, 2018, 2019, & 2020 ခုနှစ်ဗိုလ်မှူး Taoist အားလပ်ရက်
Moola Bandha: အဆိုပါ Master Key ကို
အဆိုပါမင်းဆက်မှတဆင့် Taoism ၏သမိုင်း
Qi စိုက်ပျိုးမှုဇာတ်စင်နှစ်: စုရုံး Qi
ဝူဝေ: က Non-လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလှုပ်ရှားမှု၏ Taoist နိယာမ
အီတလီတွင်တိုက်ရိုက် Object ကို Pronoun
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Entrare" Conjugate လုပ်နည်း
အော်ရီဂွန် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
ကြိမ်နှုန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဥပမာပြဿနာမှ Wavelength ပြောင်း
'' Slaughterhouse-ငါး '' Quotes
ကျမ်းစာထဲမှာ Agape မတ်ေတာဆိုတာဘာလဲ
အကြီးစားသတ္တုပရိသတ်များသည်ထိပ်တန်း 10 ချယ်လ်ဆီးအသင်းအယ်လ်ဘန်
Menu ကို Item အရိပ်အမြွက်ပြသရန်လုပ်နည်း
Cetaceans - ဝေလငါး, လင်းပိုင်နှင့်လပိုင်
ယင်းကြိယာ၏ example sentences ယူခဲ့
Classical Music ကိုတစ်ခုမိတ်ဆက်ခြင်း
လိုက်တယ်အဝတ်အချည်းစည်းမှဲ့ Rat အချက်အလက်နဲ့ (Heterocephalus glaber)
တစ်ဦး Umbrella တူးစင်နှင့်အတူနောက်ထပ်ငါးကိုဖမ်း
အွန်လိုင်း Payday ချေးငွေက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏သတိပေးစားသုံးသူ